MAXAA LAGU MAAGAY? Asbaabaha ugu wayn ee YAMAN eedda looga gelayo oo urursan! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka MAXAA LAGU MAAGAY? Asbaabaha ugu wayn ee YAMAN eedda looga gelayo oo...
MAXAA LAGU MAAGAY? Asbaabaha ugu wayn ee YAMAN eedda looga gelayo oo urursan!
(Cadan) 07 Okt 2018 – Yaman in la dumiyo waxaa isu gu tagay reer Galbeed iyo Aal Sacuud-Aal Nahyaan. Danta qolada hore waa in ay reer Yamaneed bulsho ahaan iyo dabadeed qiyam ahaan u burburiyaan, waayo waa dad dhaqanraac ah oo la gelin kari waayay aragtiyaha iyo dhaqannada reer Galbeedka.
Qolooyinka dambena wax ay diidayaan dawlad dariskooda ah oo aan boqortooyo ahayn oo weliba dimuqraadiyadi ka soo urayso, taas oo xukunkooda dhaxaltooyada ah cadaw u noqon doonta. Labadaa ujeeddo ee is kaashaday ayay umaddaa miskiinadda ahi u rogmatay.
Xulufo uu Sucuudigu hoggaaminayo ayaa weerar ku qaadday dalka Yaman 2015, si ay xilka ugusoo celiyaan madaxwayne Abdrabbuh Mansur Hadi ugana hor tagaan Xuutiyiinta xiriirka la leh Iiraan, balse weli ma mira dhalin.
Previous article”Dabaal baro waayo mar dhow waxaad ku baxsanaysaa Badda Dhexe!” – Iiraan oo talo la yaab leh u jeedisey Netanyahu
Next articleMalla kulantay Magool, Saado Cali & Maandeeq ee deeto ma EEDDAY?!! (Qiso qiime badan!)